ब्रिजवेनमा ‘तिज र गलबन्दी’ । विद्यार्थीलाई छुटैछुट ! « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » News » ब्रिजवेनमा ‘तिज र गलबन्दी’ । विद्यार्थीलाई छुटैछुट !
ब्रिजवेनमा ‘तिज र गलबन्दी’ । विद्यार्थीलाई छुटैछुट !
Nepaltube Australia Published On : 12 August, 2019
हिन्दु नारीहरुको महान् चाड हरितालिका तिज यसपाली व्रिजवेनमा गलबन्दीको साथमा मनाउने तयारी भएको छ ।
‘तिज धमाका’ नाम दिइएको कार्यक्रममा अहिलेका चर्चित लोकगित ‘गलबन्दी’का गायक प्रकाश सपुत मुख्य आकर्षकका रुपमा प्रस्तुत हुदैछन् । उनको गलबन्दी र ब्याटल गितले सहभागीलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने आयोजकको दाबी छ ।
त्रिपल एन अनलाईन स्टोर र भानु बरालले संयुक्त रुपमा आगामी अगष्ट ३१ तारिखमा ब्रिजवेनको हथ्रोनमा तिज कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
तिज कार्यक्रमका लागि लोक गायक प्रकाश सपुतसंगै र गायक सन्दिप न्यौपाने, लोक तथा ब्याटल गायिका प्रिती आले र गायिका चन्दा अर्याल पनि ब्रिजवेन आउदैछन् ।
लोकगितको अलावा नृत्यको स्वाद चखाउन बुगिवुगीकी विजेता कविता नेपाली पनि ब्रिजवेन आउदैछिन् ।
नेपाली कलासंस्कृतीलाई प्रवासमा पनि निरन्तरता दिनका लागि तिज कार्यक्रम गर्न लागिएको आयोजक अमृत खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि १५ डलर टिकट शुल्क तोकिएको छ । कार्यक्रममा ५ सय भन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकको दाबी छ ।
विद्यार्थी छुटैछुट, अभिभावकलाई निशुल्क
तिज कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहाने विद्यार्थीलाई छुटैछुटको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । जनवरी २०१९ पछि अष्ट्रेलियाका आएका विद्यार्थी मध्ये ५० जनालाई निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । आयोजक त्रिपल एन अनलाईन स्टोरको फेसबुक पेजमा गएर कमेन्टमा नाम दर्ता गर्ने पहिलो ५० जना विद्यार्थीले निशुल्क टिकट पाउने आयोजक भानु बरालले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अन्य विद्यार्थीहरुले भने आफ्नो आइडीकार्ड देखाएपछि ५ डलर छुट पाउनेछन् ।
नेपालबाट आफन्त वा छोराछोरी भेट्न अष्ट्रेलिया आएका अभिभावकलाई भने निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
पैसाको अभावमा तिजको रमाइलोबाट बञ्चित नहोस् भनेर निशुल्क र छुटको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।